အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ( Feb 2013 ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ( Feb 2013 )
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ( Feb 2013 )
Posted by kai on Feb 2, 2013 in Myanmar Gazette, News | 31 comments
BURMA RELATED NEWS – FEBRUARY 01, 2013
AP – Myanmar aims to leave least-developed status
AP – Myanmar’s first international literary festival opens amid newfound freedoms of expression
AFP – Myanmar festival celebrates new literary freedom
AFP – Myanmar’s Suu Kyi urges ‘more human’ democracy
Reuters – Carlsberg returns to Myanmar after sanctions eased
IANS – Myanmar opening new economic era: Thein Sein
UPI – HRW: Myanmar reforms over-hyped
The Nation – Myanmar welcomes peace overture from Kachin rebels
Rappler.com – Visa credit cards make Myanmar debut
Quartz – Investors, beware: It’sabumpy ride on the new Burma Road
Contify Investment – L&T signs $100-mln contract with Petronas Carigali Myanmar for offshore project
Eleven Myanmar – Myanmar: second most cervical cancer in Southeast Asia
WSLS – Probe: Pilot error may have caused Myanmar crash
Shanghai Daily – Myanmar, Paris Club creditor countries begin new era of relationship
VOA News – Copper Mine Controversy Tests Burma’s Leaders
Bangkok Post – Surapong plans Myanmar visit
Asahi Shimbun – Myanmar opens retailing sector to foreign investors
The Irrawaddy – Buddhists Leaving Bangladesh Welcomed in West Burma
The Irrawaddy – KIO Offers to Halt Hostilities
The Irrawaddy – KNU Marks 64 Years of Resistance
Mizzima News – Higher wages will keep Burmese migrants in Thailand, say researchers
Mizzima News – World-famous authors come to Rangoon
Mizzima News – HRW director criticizes ‘international oversell and hasty praise’ for Burma govt
DVB News – Parliament approves new religious affairs minister
DVB News – Burma’s human rights record remains ‘poor’ despite reforms
By Aye Aye Win, | Associated Press –9hours ago
YANGON, Myanmar (AP) — Myanmar’s reformist president said Friday that his country’s recent clearing of billions of dollars of foreign debt is its first step toward ending its least-developed nation status.
Myanmar, then called Burma, was declaredaleast-developed nation by the United Nations in 1987. The status is given to countries with the lowest indicators of socio-economic development according to the U.N.’s Human Development Index.
Myanmar had one of the region’s strongest economies in the 1950s but plunged intoadecline afteracoup in 1962 instituted military rule withasocialist bent.
The World Bank and the Asian Development Bank cleared Myanmar’s outstanding debt to them of about $900 million withabridge loan from the Japan Bank for International Cooperation on Jan. 27. It allows them to make new development loans to Myanmar.
မတောက်တစ်ခေါက် ပညာလေးနဲ့ ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ။
နောက်နေ့မှပဲ ကွန်မန်း ပြန်ရေးတော့မယ်။
Did Neanderthals and modern man really co-exist? New study casts …
New York Daily News-5 hours ago
BERLIN — Theories about when the last Neanderthals walked the Earth may have to be revised, according toastudy that suggests they …
ဦးသိန်းစိန် တက်ကတဲက ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေး နဲ့၊ အက်စ်အမ်အီး တွေ ကို ဆက်ပို့ လုပ်မယ်ဆိုတာ
Myanmar’s first literary festival kicks off in Yangon
Subject: Duel citizenship မလို..ချစ်ယင် ကျေနပ်ယင်ပြန်လာ..လှေနံနှစ်ဖက်နင်းယင်ကားသွားမယ်..
Duel citizenship မလို..ချစ်ယင်
Gandawin MeeးDuel citizenship ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူတွေကို
ဥိးတည်ပြိး စဉ်းစားမှာလဲ ။ စဉ်းစားမိတဲ့ ၂ချက်က လျှောက်ထားသူဟာ
မြန်မာပြည်မှာမွှေးပြီး ပြည်ပကို မီသားစုနဲ့ဖြစ်စေ …တယောက်ထဲဖြစ်စေ…
ရောက်/ထွက် သွားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ မိဘ ၂ ဦးစလုံး မြန်မာပြည်မှာ
Toung Chayးဒီကိစ္စက လွတ်တော်က IQ ၃၀ သမားတွေကိုပြောယူရမယ် ၁။
အခြားနိုင်ငံတွေဘာကြောင့် လုပ်ရသလဲ ၂။ ၂နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပေးခြင်း
ဘာပြဿနာရှိလဲ ။ မူလဇစ်မြစ်ကို အခြေခံဥပဒေက ကာကွယ်ပေးပါ။
မြန်မာစကားပြောတဲ့ မြန်မာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ နိုင်ငံခြားသားမဖြစ်နိုင်ဘူး ။သူ
သူ့့ကို အခြားနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပေးရမယ်။ ပြန်လာရင်
သူမြန်မာနိုင်ငံသားပဲ ။အခြားနိုင်ငံသားကို စွန့်လွှတ်စရာ မလိုဘူး ။
Aung Khin Myint ပြည်ပရောက်တွေ အိမ်ပြန်ဖို့ duel citizenship ဆိုတာ
ရှိလား မလား …း))
ဒီနေ့အဖို့ ဖေဘွတ်က မဆင်းခင် ကျနော့်စတေးတပ်မှာ ကူးယူ ဖော်ပြထားတဲ့
“ကိုVictor Feng” အဆိုနဲ့ ပက်သက်ပြီး နည်းနည်းတော့ ကျနော်
ကိုးလေးလုံး လှုပ်ရှားမှု (၉.၉.၁၉၉၉) ခုနှစ်က ရန်ကုန် စိန်ပေါ
ကျောင်းရှေ့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သံကြိုးတွေနဲ့ တုပ်နှောင်ပြီး ဆန္ဒပြတဲ့
အဂ်လန်- သြစီ နှစ်နိုင်ငံသား ခံယူထားတဲ့ ဂျိမ်းမောစလေ ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
ကျနော် ဆိုလိုချင်တာက အနောက်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံထားတဲ့
အဝေးရောက် မြန်မာတွေကို ပြည်တွင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့
နေရာမှာ အဲဒီ duel citizenship ဆိုတဲ့ နှစ်နိုင်ငံသား ခံခွင့်ကို
စဉ်းစားပေးဖို့ လိုပါတယ် … အဲဒါဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့
အဝေးရောက် အများစု ပြန်လာမယ်လို့ ကျနော်တော့ ထင်ပါတယ် … အခုတော့
ကျန်းမာရေး အာမခံ၊ နေထိုင်မှု အာမခံ စနစ်တွေအကြား ကျင့်သားရနေတဲ့
သူတို့အဖို့ အလွယ်တကူ ပြန်လာဖို့ဆိုတာ ချက်ချင်းတော့ မလွယ်နိုင်ပါဘူး …
ပြီးတော့ နယ်စပ်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှညာ မွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့ သားသမီးတွေရဲ့
အနာဂတ်ကိုလည်း သူတို့ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမှာပါ … ဒါကြောင့် duel
citizenship ဆိုတဲ့ ပုံစံဟာ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တံခါး
Kyaw Than အမြင်က ကြောင်တယ်.ကျဉ်းတယ်၊ ဒီနေ့
( state apparatus) ခိုင်လုံပြည့်စုံပြီး
အဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားအဆောက်အအုံက အသားကျမောင်းနှင်နေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး
နိုင်ငံတေါပဲဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထက် အစစ အရာရာသာလွန်နေတဲ့
တဟုန်ထိုးတိုးတက်နေတာတွေမှယ သူတို့ရဲ့ ပင်လယ်ရပ်ခြားအမျိုးသားတွေရဲ့
အခန်းကဏ္ဍက သိပ်ကိုအခရာကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကို တရုတ်ကော.အိန္ဒိယပါ
နှစ်နိုင်ငံသားအဖြစ် မပေးပါဘူး။ အထူးသတ်မှတ်ချက်နဲ့ အခွင့်အရေးတချို့တော့
ပြဌာန်းပေးထာပါတယ်။ ဥပမာ အိန္ဒိယဆိုယင် ဝေးမြေရပ်ခြားက ကုလားတွေကို
မူလအိန္ဒိယအမျိုးသားများ PIO ( People of Indian Origin)
ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပြဌာန်းပေးထားပါတယ်၊ တရုတ်လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါဘဲ။
တိုင်းပြည် နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို ကိုယ်ကြားဖူးတဲ့ စကားလုံးရဲ့
နောက်ကွယ်က အဓိပ္ပာယ် အကျိုးအပြစ်ကို ပြည်စုံအောင်မလေ့လာပဲ
အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အနိဌာရုံပစ္စလက် သေတ္တာ ( Pandora Box)
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က တိုင်ပြည်အပြင်ဖက်မှာ ဘယ်နိုင်ငံသားမှမဟုတ်ဘူး၊
လူသားက.. ဗြဟ္မာကနေ.. မြေဆီစားဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်..။ အာဒံဧ၀ကလည်းမဟုတ်ဖူးဗျ..
အောက်က ပုံထဲက..အင်းဆက်စာတဲ့ အကောင်ကနေ.. ပြောင်းလာတာတဲ့..
သက်သတ်လွတ်စားတဲ့အကောင်မဟုတ်ဖူးနော..။ လူသားရဲ့ဗီဇကိုက.. အသားအသက်စားတဲ့အကောင်…
အဲဒါ.. လူသားတို့ရဲ့.. ဘိုးဘေးဘီဘင်ဘောင်ဘောကြီးတဲ့…။
Meet your mama: Ancestor of all placental mammals revealed
Artist’s rendering of the hypothetical placental ancestor,asmall, insect-eating animal withalong, furry tail. Researchers reconstructed the anatomy of the animal by mapping traits onto the evolutionary tree most strongly supported by the combined phenomic (physical traits you can see) and genomic data and comparing the features in placental mammals with those seen in their closest relatives. / Carl Buell
“Species like rodents and primates did not share the Earth with nonavian dinosaurs, but arose fromacommon ancestor —asmall, insect-eating, scampering animal — shortly after the dinosaurs’ demise,” said researcher Maureen O’Leary at Stony Brook University in New York.
အဘရဲ့အဘရဲ့ ………………………………………
အဘပုံကို အခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့ တယ်။
ဆွေ ၇ ဆက်၊ မျိုး ၇ ဆက်။ ။ ပါရာဇိကဏ်၊ ပါ။ ၃၀၇။ ဋ္ဌ။ ဒု- ၂၀၀။ ၎င်းင်း ပါ။ ၃၃၃။ ဋ္ဌ။ ၂၆၄။ မိမိ၏အထက်နှင့်အောက် ၇-ဆက်တိုင် ရေတွက်၍ရသူကို ‘ဥာတိက- ဆွေမျိုးတော်သူ’ဟု ၀ိနည်းပိဋကတ်တော်၌ အသိအမှတ်ပြုထား၏။ ၇- ဆက်တွင် အထက်, အောက်မှ မပါဝင်သူကို ‘အညာတိက-ဆွေမျိုးမတော်သူ’ဟု ယူရ၏။
(၁) ဘ ဘိုး ဘေး ဘီ ဘင် ဘောင် ဘော ဟူ၍လည်းကောင်း၊
(၂) ဘ ဘိုး ဘေး ဘီ ဘင် ညှောက် စေ့- ဟူ၍လည်းကောင်း၊
(၃) ဘ ဘိုး ဘေး ဘီ ဘဲ့ ဘော့ ဘွေးဟူ၍လည်းကောင်း၊
(၄) အဖ အဖိုး အဘွေး အဘဲ အဘီ အဘော အဘောင် ဟူ၍လည်းကောင်း၊
ဤသို့ ဆရာအမျိုးမျိုးတို့ ကျမ်းအမျိုးမျိုးတို့၌ တစ်မျိုးစီ ဝေါဟာရသုံးစွဲပုံ ကွဲကြောင်းနှင့်မှတ်သားကြ၏။
(၁) သား, မြေး, မြစ်, တီ, တွတ်, ကျွတ်, ကျွတ်ဆက်-ဟူ၍လည်းကောင်း၊
(၂) သား, မြေး, မြစ်, တီ, ကျွတ်, ဆတ်, ဆက်-ဟူ၍လည်းကောင်း၊
(၃) သား, မြေး, မြစ်, တီ, မြှော့, ကျွတ်, ကျွတ်ဆက်-ဟူ၍လည်းကောင်း၊
ဤသို့ မူကွဲသုံးမျိုးစီ တွေ့မှတ်ရဖူး၏။
‘ဆွေစုမျိုးစစ်၊ ခုနစ်ဝင်ထ၊ ကိုယ့်ထက်မှလျှင်၊ အဘç အဘိုး၊ ခေါ်ရိုးစဉ်ရှေး၊ အဘေး အဘဲး၊ တစ်ကွဲ အဘွေး၊ တရေး အဘော်၊ အောက်သော် တခြား၊ သားနှင့် မြေး, မြစ်၊ တစ်ဆစ် တီ, မြှော့၊ မှတ်လော့ ကျွတ်, ဆက်၊ ကျမ်းဂန်ထွက်၏။’ဟူ၍ ဖြစ်၏။
ဆွေ ၇ ဆက်ကို ၄မျိုး ၄မည် ခေါ်ရင်၊ မျိုး ၇ ဆက်ကိုလည်း ၄မျိုး ၄မည်ပြည့် သွားအောင်
အသား၊ အမြေး၊ အမြစ်၊ အတီ၊ အတွတ်၊ အကျွတ်၊ အကျွတ်ဆက် လို့ကျနော်တို့ 
ထပ်ဖြည့် လိုက်ရင်မကောင်းပေဘူးလား…. အဟဲ!!!!
မှတ်သားသင့် တာလေးသိရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှာတွေ့တဲ့ “ပုံတောင် ပုံညာ ပရိုင်းမိတ်” ဆိုတာ အဲသည့်အကောင်ရဲ့မြေး ပေါ့ဗျာ။ အိမ်မွေးကြောင်အရွယ်လောက်ပဲ ရှိသတဲ့။ တွေ့ကရာအကုန်ဝါးတဲ့ အစုံစားသတ္တဝါပါ။
ဆက်ပွါးရရင် အဲသည့် ဘိုးဘေးဘီဘင်ဘောင်ဘောကြီး နဲ့ လူသားရဲ့ကြားထဲမှာ ကွင်းဆက်တစ်ခုပျောက်နေသေးပါတယ်။ အဲဒီကွင်းဆက်ကို “ပုံတောင် ပုံညာ”က “ကျစ်ချောင်” တွေမှာ တွေ့မလားလို့ လာရှာကြတာပါ။
အမှတ်မမှားရင်.. အဲဒီပုံတောင်ကအရိုးတခုနဲ့.. ဦးကျောက်တို့ဆရာဦးသော်တင့်ယူအက်စ်လာ.. ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတာပဲ..
မြန်မာပြည်က.. ဘိုးဘွားအမွေ.. သတ္တုတွေတူးနေ..ရောင်းစားနေမယ့်အစား.. အဲဒီအရိုးတွေနဲ့.. ပြစား.. စီးပွားရှာလို့ရနိုင်တာ.. :bar:
အယ်ဒီတာ့အာဘော်ရေးနေတာ.. အဲဒါ.. မြစေတီကျောက်စာက..နှစ်၉၀၀ တင်းတင်း ပြည့်နေတာ..သတိထားမိသွားလို့..
မြစေတီကျောက်စာကို ကျန်စစ်သားမင်းကြီး နတ်ရွာစံပြီးနောက် တနှစ်ခန့်အကြာ၊ မြန်မာသက္ကရာဇဖ် ၄၇၅-ခုနှစ်၊ ခရစ်နှစ် ၁၁၁၃-ခုနှစ်တွင် ရာဇကုမာရ်မင်းသားက ရေထုးခဲ့သည်။ ထိုကျောက်စာကို ပုဂံမြို့၊ မြင်းကပါရပ်၊ မြစေတီဘုရားအနီးတွင် တွေ့ရ၍ မြစေတီကျောက်စာ-ဟု လူသိများပါသည်။ ဤကျောက်စာ၌ မျက်နှာလေးဖက်ပါရှိသည်။ မျက်နှာတဖက်စီတွင် မြန်မာ၊ မွန်၊ ပါဠိ၊ ပျူ တဘာသာစီဖြင့် ရေးထိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။
သူကြီးမေးလ်မရှိတော့လို့ ဒီကနေလှမ်းမေးတာပါ။ သူကြီးကလက်တံရှည်တော့ သိနိုင်မလားတွေးမိလို့ပါ။ မေးလ်ကနေပဲ မေးပါရစေ။ မေးလ်အကောင့်လေးထပ်ပေးပါဦး။
ပြောရရင်.. ခရစ်ယန်ရဲ့..ကက်သလစ်နဲ့..ပရိုတက်စတန့်က… မြန်မာထေရ၀ါဒနဲ့.. မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ.. အစ္စလမ်ရဲ့.. ရှီးယားနဲ့.ဆွန်နီ..စတာတွေနဲ့. သဘောတရား .တော်တော်ဆင်ပါတယ်..
ကွဲချက်က.. ဆိုင်ရာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စကားကို လိုက်နာနားထောင်တာနဲ့.. ဘုရား(တမာန်တော်)စကားတိုက်ရိုက်လိုက်နာလေးစားတာမျိုးပါ..။
ဒီနေ့သတင်းမှာတေ့ာ.. ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး. နှုတ်ထွက်တဲ့သတင်းပေါ့…
မြန်မာထေရ၀ါဒနဲ့ဆို.. သံဃာ့မဟာနာယကအကြီးအကဲပေါ့… :harr:
အဲ.. အမေရိကားမှာ..အမေရိကန်တွေက.. ပရိုတက်စတင်န့်များပါတယ်..
US Catholics Surprised by Pope’s Resignation
Wall Street Journal	– ‎29 minutes ago‎
American Catholics—who have been pummeled by secularism and scandal in recent years—said they were both stunned and heartened by Pope Benedict XVI’s decision to step down because of ill health, calling the action selfless and steeped in humility.
ဖေဖေါ်ဝါရီ ဆယ်သုံးဟာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ၊
( မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တပ်မတော်ဖွဲ့ ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်
တစ်ကယ်ဘဲ အသက်နဲ့ လဲလို့ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ခံကာ ကြံစည်တယ်..
သူရဲကောင်းနဲ့ဗိုလ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေရယ်…) ၂
ငါတို့မြန်မာပြည်..မိဘတိုင်းကရယ်.. ဗိုလ်အောင်ဆန်း လို သူရဲကောင်း မွေးရမယ်..
ငါတို့မြန်မာပြည်..မိဘအပေါင်းတို့ ကရယ်..အာဇာနည် အစစ် ကို ရှိဖို့မွေးရမယ်.
အော်.. ဘုရင့် နောင် နဲ့ရာဇာဓိရာဇ် တို့ လို.. မင်းရဲကျော်စွာ ပမာ ပုံ ဆောင်.. အလောင်းဘုရားတို့ လိုကွယ်. မြန်မာတိုင်း မြန်မာမျိုး အားကိုး လောက်ပေတဲ့ 
မကြောက်တမ်း မရွံ့ တမ်း မြန်မာတွေ အောင်ပန်း ဆွတ်ကြရှာလေတယ်..
* * * [( ရာဇဝင် အတ္ထုပတ္တိလည်း ရှိရမယ် မော်ကွန်းလည်း ထိုးလောက်တယ်
မြင့်မြတ်တဲ့ဗိုလ်အောင်ဆန်း ရယ်..)၂
တိုင်းပြည်အကျိုး စွန့် ခဲ့ တဲ့ များဇာနည်နွယ်..လွတ်လပ်ဖို့ ဒို့ အများကို ကျွန်အတွင်းမှ ကယ်.. တို့ မြန်မာတွေ စိုးမိုး ဖို့မျှော်ကြရှာလို့ ပေါ်လာတယ်..]
( မြန်မာနိုင်ငံ ထူထောင်ရန်နဲ့မျိုးရိုးမတိမ်အောင် ကြံဆောင်လေတယ်..
နေမျိုးသာဂီ ဗမာပြည် လက်ရုံး . ဗမာနိုင်ငံ အလုံး ထင်ပေါ်စေတယ်..
စိတ်အားသန်သန် မာန်ကိုမလျော့တယ်..ငါတို့ လူမျိုး တန်ခိုးရှိဖို့ .. သူရဲကောင်းတွေ စုံညီတယ် တစ်ကယ်ပင် သူတိုးမဟာဗန္ဒုလနှယ် စွမ်းသတ္တိ ရာဇဝင်ပြောင်တယ်
သားကောင်းများလို့ခေါ်ရလောက်ပေတယ် ဥဒါန်းတွင်စေဖွယ်..
မြန်မာသူရဲကောင်း အပေါင်းတွေရယ်) ၂
တိုင်းပြည်အကျိုး စွန့် ခဲ့ တဲ့ များဇာနည်နွယ်..လွတ်လပ်ဖို့ဒို့ အများကို ကျွန်အတွင်းမှ ကယ်.. တို့ မြန်မာတွေ စိုးမိုး ဖို့မျှော်ကြရှာလို့ ပေါ်လာတယ်.. ]
၁) သင့်လည်ချောင်းထဲက ယားနေတယ်ဆိုရင် နားရွက်ကိုကုတ်လိုက်ပါ… နားရွက်မှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေကိုလှုံ့ဆော်မိတဲ့အခါ အဲ့ဒီအာရုံကြော တွေဟာ လည်ချောင်းထဲက ကြွက်သားတွေကို အလိုအလျောက် ရုတ်တရက် တုံ့ပြန်စေပြီး ယားယံမှုကို ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်….
၂) လူတွေဆူညံနေတဲ့ နေရာမှာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းပြောတဲ့နေရာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အသံကို မကြားနိုင် ဖြစ်နေပါသလား…. ရုတ်ချည်း ပြောလိုက်တဲ့အသံကိုကြားဖို့ဆိုရင်တော့ ညာဘက်နားကို အသုံးပြုပါ… ဂီတသံစဉ်တွေကိုနားထောင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်နားကို အသုံးပြုပါ….
၃) သန့်စင်ခန်း ဒါမှမဟုတ် တခြားသင့်တော်တဲ့ တစ်နေရာရာနဲ့ အလှမ်း ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ အလွန်အမင်း အခင်းကြီးငယ် သွားချင် နေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ချစ်သံယောဇဉ်လေးတွေအကြောင်း စိတ်ကူးယဉ် လိုက်ပါ… ဒါက သင့်ဦးနှောက်ကို အာရုံလွှဲပြောင်းပေး နိုင်ပါတယ်….
၄) ဆရာဝန်က သင့်ကိုဆေးထိုးတော့မယ်ဆိုရင် ဆေးထိုးအပ်ဝင်တာနဲ့ ချောင်းဟန့်လိုက်ပါ… ချောင်းဆိုးချောင်းဟန့်တာဟာ သင့်ရဲ့ ကျောရိုးပြွန် ထဲက ဖိအားကိုမြင့်တက်စေပြီး ဦးနှောက်ကို နာကျင်မှုဝေဒနာ ပေးပို့တဲ့ အခါမှာ ကန့်သတ်ထားစေနိုင်ပါတယ်…
၅) နှာစေးနေလို့ နှာခေါင်းပိတ်နေတဲ့အခါမျိုး… အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပိတ်နေတဲ့ အခါမျိုးမှာ သင့်လျှာကို ခံတွင်းအပေါ်ဘက်နံရံမှာဖိကပ်ထားပြီး မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာ လက်တစ်ခေါင်းနဲ့ဖိထားလိုက်ပါ… ဒီအနေအထား အတိုင်း စက္ကန့် ၂၀ လောက် ထားလိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်နှာနုရိုးကို လှုပ်ခါ စေနိုင်ပြီး ပိတ်ဆို့နေတာတွေ လျော့ပါးပြီး ရှင်းလင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်….
၆) အစားကောင်း အသောက်ကောင်းတွေ အားပါးတရစားပြီး အရမ်းပြည့် အင့်ကာ အိပ်ချင်လာပြီဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကို စောင်းပြီး လှဲလျောင်းပါ… ဒီပုံစံဟာ သင့်အစာအိမ်ကို အစာပြွန်ထက်ပိုနိမ့်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိတဲ့အတွက် အစာချေရည်အက်ဆစ်ပြောင်းပြန်စီးဆင်းမှုကို တားဆီးပေးပြီး အစာချေရည်တွေ သင့်လည်ချောင်းထဲက မထွက်လာအောင် ထိန်းပေးထား နိုင်ပါတယ်…
၇) သင် သွားကိုက်တယ်ဆိုရင် ရေခဲတုံးတစ်တုံးနဲ့ လက်မနဲ့လက်ညိုး ကြားက လက်ဖမိုးနေရာလေးကို ပွတ်ပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင် ပါတယ်… အဲ့ဒီနေရာက အာရုံကြောဟာ ခံတွင်းကနာကျင်မှု ဝေဒနာကို သိတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ပိတ်ဆို့အောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင် ပါတယ်…
၈) သင်အလွန်အကျွံအရက်မူးတဲ့အခါ အခန်းတစ်ခုလုံးချာချာလည်လာပြီး ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်အောင် တစ်ခုခုကို ဆုပ်ကိုင်ထားရပါတယ်… ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ အရက်ဟာ cupula လို့ခေါ်တဲ့ နားထဲက ဟန်ချက်ထိန်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းရဲ့ သွေးကို ရေဓာတ်လျော့ပါးပြီး အားနည်းစေလို့ပါပဲ… တစ်ခုခုကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့အခါ ဦးနှောက်က နောက်ထပ်ရည်ညွန်း မှတ်တစ်ခုကို ရရှိသွားပြီး ချာချာလည်ခြင်းကရပ်အောင် လုပ်ဆောင် ပေးပါတယ်….
၉) နှာခေါင်းသွေးယိုတဲ့အခါ နှာခေါင်းအောက်နားမှာရှိတဲ့ အပေါ်ဘက် သွားဖုံးပေါ်က အခွက်လေးထဲမှာ ဂွမ်းနည်းနည်းကိုခုပြီး ခပ်နာနာလေး ဖိပေးပါ… နှာခေါင်းကယိုတဲ့သွေးအများစုဟာ နှာခေါင်းအလည်က အရိုးနု (နှာနုရိုး) ကနေ လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုဖိလိုက်ရင် သွေးယိုရပ်သွား စေနိုင်ပါတယ်…
၁၀) စိတ်လှုပ်ရှား ထိတ်လန့်နေသလား… သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကို လက်မကို မှုတ် (စုပ်) ရင်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်… vangus လို့အမည်ရတဲ့ အာရုံ ကြောဟာ နှလုံးခုန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး အသက်ရှူခြင်းဖြင့် သင် တည်ငြိမ်မှု ရလာပါလိမ့်မယ်…
၁၁) ရေထဲမှာ ခဏလောက် အသက်ရှူချင်သလား… ရေထဲကိုမဆင်းခင် အသက် တဝကြီးရှူတာ ပုံမှန်ထက် မြန်မြန်ပြင်းပြင်း ရှူတာမျိုး လုပ်မယ့် အစား ရှူသွင်းရှူထုတ်ခြင်းကို အချိန်တို အတွင်းများများ လုပ်ဆောင် လိုက်ပါ… ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်ဦးနှောက်ကို အောက်ဆီဂျင် ပိုရသလို ခံစားရစေပြီး အချိန် ၁၀ စက္ကန့်လောက် ပိုကြာကြာနေနိုင် ပါလိမ့်မယ်….
၁၂) ရေခဲမုန့်တွေ အအေးတွေ စားသောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ပါးစပ်အပေါ် နံရံကနေပြီး ခေါင်းထဲထိ ထိုးကိုက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်… အဲ့ဒါကို Brain freeze လို့ခေါ်ပါတယ်… အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါ သင့်လျှာကို ပါးစပ်အပေါ်နံရံ အတိုင်း အပြားလိုက် ဖိကပ်ထားပါ… လျှာနဲ့ နေရာများများ ထိနိုင်သမျှ ထိအောင် ကပ်ထားပေးရပါမယ်… brain freeze ဟာ ခံတွင်းနံရံမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောကို အလွန်အမင်း အေးစေတဲ့အခါ ဦးနှောက်က ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး အေးနေတယ်လို့ ယူဆသွားတဲ့ အတွက် ဖြစ်လာတာပါ… ဒါကြောင့် သင့်ဦးခေါင်းကို နာကျင် ကိုက်ခဲတဲ့အထိ အပူပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်… ခံတွင်း အပေါ်နံရံကို လျှာနဲ့ကပ်ပြီး အနွေးဓာတ် ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ဦးနှောက်ကို ပြန်အေးစေပြီး ကိုက်ခဲမှုက သက်သာစေ ပါတယ်….
၁၃) သင့်ရဲ့လက်တွေ အိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာ လက်တွေဟာ ဘေးတစ်ဘက် တစ်ချက်ကို လွှဲပြီးလှုပ်ရမ်းနေပါတယ်… ဒီအခါမှာ လက်တွေက ပြန်နိုးလာပြီး တစ်မိနစ်အတွင်းမှာပဲ အပေါ်ပြန်တက် လာပါတယ်… လက်တွေ ဘာကြောင့် အိပ်ပျော်လဲဆိုတော့ လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေကြောင့် ဖြစ်ပြီး လည်ပင်းကို အသာအယာ နှိပ်နယ် ပေးခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ်… သင့်ခြေထောက်တွေ အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အာရုံကြောတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်… ဒီလိုမဖြစ်အောင် ရပ်ဖို့နဲ့ လမ်းလျှောက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်….
၁၄) ကြို့ထိုးနေသလား… လက်မနဲ့လက်ညိုးကို ကြို့ထိုးမရပ်မချင်း မျက်ခုံးပေါ်မှာဖိထားပါ… မကြာပါဘူး… ခဏနေရင် ရပ်သွားပါလိမ့်မယ်….
Source from – ဒင်(မြန်မာ့ဟာသနှင့်သတင်းများ)
အခုတင်ပြီးသွားတဲ့.. သမ္မတအိုဘားမားရဲ့..State of the Union Address မှာ မြန်မာပြည်အကြောင်းပြောသွားတယ်ဟေ့…
အောက်မှာ.. transcript ထုတ်ပေးထားတယ်..။
ကျုပ်နားလည်တဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀ ကုသိုလ်ကံ..
( အရှည်ကို.. လိပ်ပြာအတောင်ပံခတ်တာနှင့် မုန်တိုင်းဆက်စပ်ပြခြင်းဖြင့်တွဲဖတ်ပါ.. )
Asteroid to Miss Earth by 15 Minutes on Feb. 15 – Belmont, CA Patch
1 day ago – Bill Nye, a.k.a. “The Science Guy,” explains the affect and impact could have on Earth.
On Friday, Feb. 15, asteroid 2012 DA14 will pass within 17,200 miles — or 15 minutes — of Earth, according to scientist Bill Nye.
“This one will miss us by about 15 minutes,” Nye explained. “Fifteen minutes difference and that’s it.”
“If suchameteor were to hit Atlanta or New York City or Boston, that would be it for those municipalities,” Nye said. As much as 1,200 square miles would be destroyed, Nye added.
According to Nye, there are approximately 100,000 “Earth-crossing” asteroids and, for the first time in human history, the possibility exists that something could be done should one threaten Earth.
“It is something that we as humans all over the world ought to get involved in,” he said.
Craig Lloyd, Feb 13th 2013
Late last month, we told you about an asteroid that will fly by the Earth at close proximity on February 15. Essentially, it will squeeze it’s way in between the Earth and the Moon, which is actually really close, and one company is saying that the asteroid is worth $195 billion in materials, such as metals and propellants. However, others aren’t so sure about that figure.
ဂြိုလ် 2012 DA14 ရဲ့ ကမ္ဘာနားကိုကပ်လာတဲ့ လမ်းကြောင်းကို မြင်ရတော့ 
သေခြင်းရဲ့အခြားတဖက်ကို အလိုလို မြင်ယောင်မိတယ်ဗျ။
ဒီ့ ထက်မက လမ်းကြောင်းလေးနည်းနည်းလေး ထပ်လွဲပြီး ကမ္ဘာကိုများဦးတည်ခဲ့ ရင်
ဒီ comment ကိုတောင်ရေးနိုင်ပါ့ ဦးမလားမသိ။
နီးနီးလေးနဲ့ ကပ်လွဲသွားလို့ ။ ဟင်း…………
လူကိုဝစေတဲ့ ဆိုဒါတွေအပေါ်.. အခွန်တိုးကောက်ဖို့လုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း….
ဆိုတော့.. အမေရိကန်တွေအလုပ်လုပ်ပုံ.. တွေးနိုင်အောင်ပါ..။
.. မြန်မာတွေက အသည်းရောဂါနဲ့ သေတာများသမို့.. အသည်းရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဇစ်မြစ်တွေကို.. အခွန်တိုးကောက်သင့်တယ်..
ဥပမာ..။ ရေစိုမှိုတက်ငရုပ်သီးမှုန့်..။ အကျီ အ၀တ်ဆိုးဆေးတွေ..။
မြန်မာမလေးတွေ တော်တော့်ကို ဈေးပေါသွားတာပဲ ။
မလေးငွေ 10 ဆိုတော့ ၄ ဒေါ်လာ လောက်ပဲ ရှိတာပဲ ။
သို့ ….. ညီမလေး
တစ်လောက အင်တာနက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ အနည်းငယ် ပြောလိုပါတယ် ။
မြန်မာဆိုတာ ခေတ်အဆက်ဆက်က အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့သူတွေပါ ။
အမျိုးထိရင် မချိအောင်နာတတ်တာ မြန်မာလူမျိုးပါ ။
မြန်မာဆိုတာ ကိုယ့်လူမျိုးကို မဆိုထားနဲ့ ၊ လူမျိုးခြားတွေ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့ရင်တောင် ၊
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို မနေတတ်ပဲ ၊ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဝင်ရောက်ကူညီတတ်သူတွေပါ ။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ထားကို မြန်မာလူမျိုးချင်း ပြန်ပြီး တရားချနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အဲဒီတော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ….
” တကာတော်ရဲ့ မိခင်က တကာတော်ရဲ့ ဖခင်ကို မချစ်မနှစ်သက်တော့လို့ ၊
တရုတ်ကို ယူလိုက်တယ် ဆိုပါစို့ ။
တကာတော့်မိခင်ဟာ တရုတ်ဖြစ်သွားပါသလား….. ”
” မဖြစ်ပါဘူး ဆရာတော်
အမေကတော့ အမေပါပဲ ။ ”
” ဒါဆိုရင် တရုတ်ကလည်း ဝက်သားစားလွန်းလို့ဆိုပြီး
တကာတော့်မိခင်ဟာ ကုလားဖြစ်သွားရောလား….. ” ။
” အေး….. အဲဒီလိုပဲ တကာတော်…..
သာသနာ့ နယ်မြေဟာ သာသနာ့ နယ်မြေသာ ဖြစ်တယ် ” ။
ကျောင်းကပြန်အဆင်းမှာ စိတ်ထဲ မကြည်လင်တဲ့ အရေးပိုင်မင်းက ဆရာတော်ကြီးကို လျှောက်တယ် ။
” အရှင်ဘုရား….. ဒီအုတ်လှေကားထစ်တွေကိုလည်း အုတ်နဲ့လုပ်တာပါပဲ ၊
ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့ အိမ်သာကိုလည်း အုတ်နဲ့လုပ်တာပါပဲ ။
ဘုရားဆင်းတုတော်တွေကိုလည်း အုတ်နဲ့လုပ်တာပဲဖြစ်လို့ ၊
အုတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ လှေကားထစ်တွေ အိမ်သာတွေကို ရှိခိုးကန်တော့ရင်ရော ၊
အတူတူပဲ မဟုတ်ဘူးလား ဘုရား ။ ”
” အေး….. တကာတော်…. တကာတော့်မှာ အမေရှိလား ”
” ရှိပါတယ် ဆရာတော် ”
” အမ နှမတွေရော ရှိလား ”
” ဇနီးမယားရော ရှိလား ”
” အေး….. ဒါဆိုရင်….. အားလုံးဟာ မိန်းမ အမျိုးအစားချည်းပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
ဇနီးမယားအပေါ် ဆက်ဆံပြုကျင့်သကဲ့သို့ …..
အမေ အမနဲ့ နှမတွေကိုပါ တစ်တန်းထားပြီး ဆက်ဆံပြုကျင့်လို့ ရနိုင်ပါ့မလား ”
” အဲဒီလိုတော့ မရပါဘူး ဆရာတော် ”
” အမေကို အမေလို…. အမကို အမလို….. နှမကို နှမလို…. သူ့နေရာနဲ့သူ ဆက်ဆံရပါတယ် ”
” အေး….. အဲဒီလိုပါပဲ တကာတော် ”
” အုတ်ချင်းတူပေမယ့် ဘုရားအုတ် သိမ်အုတ်နဲ့ ၊ အိမ်သာအုတ် လှေကားအုတ်တို့ဟာလည်း ၊
သူ့နေရာနဲ့သူ တန်ဖိုးချင်းကွာတယ် တကာတော် ” ။
ဒီနေရာမှာ…. ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို သုံးသပ်မိတာ တစ်ခုရှိပါတယ် ။
ဘယ်လိုနေရာပဲရောက်နေနေ ….. ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်နေနေ…..
ဘယ်လိုခေတ်မျိုးပဲ ရောက်နေနေ ၊
မြန်မာမိန်းကလေးဟာ မြန်မာမိန်းကလေး ဆိုတာပါပဲ ။
မြန်မာ အမျိုးသမီးကောင်းလေးတွေကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အုတ်ကလေးတွေပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။
မြန်မာဟာ မြန်မာပါပဲ ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ လူမျိုးဟာ မြန်မာပါ ။
မိန်းမတို့အိနြေ္ဒ ရွှေပေးလို့မရ ဆိုတာ မြန်မာမ်ိန်းကလေးတွေကို တင်စားခဲ့တာပါ ။
အထူးသဖြင့် ပြည်ပမှာ …..
လစာနည်းလို့ …. အကြွေးနဲ့လာခဲ့ရလို့ …..
မိသားစုတွေကို ထောက်ပံ့ချင်လို့ ….
အဲဒီလို အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ၊ တိုင်းတပါးသားတွေနဲ့ Living Together နေနေရတာပါတဲ့လား ။
ဒါတွေက မလုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေပါ ။
မိသားစု အဆင်မပြေတာကို ထောက်ပံ့ချင်တိုင်းသာ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ ၊
Living Together နေကြစတမ်းဆိုရင် ၊
မြန်မာတစ်ပြည်လုံးက မြန်မာမိန်းကလေးတွေ နိုင်ငံထဲမှာ ရှိရှိသမျှ လူမျိုးခြားတွေကို ၊
အပြေးအလွှားနဲ့ကို Living Together အမြန်ဆုံးနေရမယ့် ကိန်းပါပဲ ။
ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ ညီမလေးတို့ရယ် ။
မလေးရှားက အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအကြောင်း နားထောင်ကြည့်ပါ ။
မလေးရှားမှာ မြန်မာမိန်းကလေးအချို့ နီပေါလူမျိုးတွေနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ပြီး သွားအိပ်တယ် ။
မလေးရှားမှာပဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အကိုဝမ်းကွဲလုပ်သူက သိတော့ ၊
နီပေါတွေနဲ့ ပြဿနာတက်တယ် ။ ရိုက်ကြ နှက်ကြ ဖြစ်တယ် ။
နောက်ဆုံး အဲဒီကောင်လေး နီပေါတွေဆီမှာ ဓားထိုးခံရတယ် ။
သူ့သူငယ်ချင်း မြန်မာအမျိုးသားလေးတွေက မခံနိူင်တော့ ၊ နီပေါတွေနဲ့ ရိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်တယ် ။
နောက်ဆုံး ဒီပြဿနာရဲ့ အစ ဖြစ်တဲ့ နီပေါတွေနဲ့ သွားအိပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာမိန်းကလေး အချို့ကို ၊
ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ၊ ဒေါသ အလျောက် လက်နဲ့ ရိုက်ခဲ့ကြတယ် ။
အခု You Tube မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အဲဒီ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေ မဟုတ်ပါပဲနဲ့ ၊
မဆိုင်ပါပဲနဲ့ ဝင်ရိုက်တဲ့ မြန်မာ ယောင်္ကျားလေးတွေကို ၊
ကျွန်တော်အပါအဝင် တော်တော်များများက လက်မခံနိုင်ကြတာ အမှန်ပါပဲ ။
သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီလို လုပ်ခဲ့ရတာလဲ ။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ ။
သွေးမတော် သားမစပ်လို့ မဆိုင်ပေမယ့် အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို အပွန်းပဲ့ မခံနိုင်လို့ ၊
ဒီလိုအဖြစ်တွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ သေချာလွန်းနေပါတယ် ။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး လူမုန်းမယ့်အလုပ်ဆိုတာလောက်တော့ သူတို့ သေချာပေါက် သိနေပါလိမ့်မယ် ။
သူတို့တွေ မှန်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ။
စေတနာ အမှားဆိုတာ သေချာ သုံးသပ်ကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ် ။
ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အရိုက်ခံနေရတာ မြင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ။
အဲဒီဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်ဝမ်းသာ ပီတိဖြစ်နေမယ့်သူတွေ တစ်ယောက်မှမရှိတာတော့ သေချာပါတယ် ။
ကျနော်တို့ မလေးရှားရောက်ခါစက မြန်မာ မိန်းကလေးဆိုတာ
မူးလို့ ရှူစရာတောင် မရှိတဲ့ အနေအထားပါ ။
ဒီနေ့လို အနေအထားမှာတော့ နေရာတိုင်းမှာ မတွေ့ချင်မှ အဆုံး မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ။
စားဝတ်နေရေးကြောင့် ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြည်ပမှာ မိဝေး ဖဝေး ငွေလာရှာနေကြတယ် ဆိုပါတော့ ။
အဲဒီတော့ ထမင်းစားရင် ငရုပ်သီးလေး ကိုက်စားပြီး တစ်ပြားကို နှစ်ပြားခွာတတ်တဲ့ ၊
ဘင်္ဂလားလို နီပေါလို လူမျိုးခြားတွေဟာ ၊
မြန်မာမိန်းကလေးတွေသာ ရမယ်ဆိုရင် လစာပါ အပြုတ်ခံတဲ့အထိ Living Together ဇာတ်လမ်းတွေ
မမြင်ချင်မှ အဆုံး ဖြစ်လာပါတော့တယ် ။
အဲဒီတော့ ….. မြန်မာယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မချိအောင်နာပါတယ် ။
ဂျိုဟိုးဘာရူးမြို့လေးမှာ မြန်မာမနဲ့အတူ တစ်ခါ ဆက်ဆံရင် မလေးငွေ မလေးငွေ 10 တဲ့ ။
ဈေးပေါလွန်းလို့ဆိုပြီး ဘင်္ဂလားတွေ ၊ နီပေါတွေ ၊ အင်ဒိုတွေ ၊ ဗီယက်နမ်တွေများ
ကြက်ပျံမကျ စည်ကားနေသတဲ့ ။
ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားမှာ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲမှာ မချိအောင်နာပါတယ် ညီမလေးတို့ရယ် ။
မလက္ကာမြို့မှာ မြန်မာမတစ်ယောက် ဘင်္ဂလားနဲ့ Living Together နေရင်း …..
သေလုမျောပါး အရိုက်ခံနေရတာတွေ့လို့ ၊ အဲဒီ မြန်မာမိန်းကလေးနဲ့ စက်ရုံ တစ်ခုထဲအတူလုပ်နေတဲ့ ၊
မြန်မာ ယောင်္ကျားလေးတွေက မခံနိုင်လို့ အဲဒီဘင်္ဂလားကို ဝင်ရိုက်ကြရင်း ၊
မြန်မာ ၊ ဘင်္ဂလားရိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ် ။
အဆုံးသတ်တော့ မြန်မာယောင်္ကျားလေး ၄ ယောက် ဆေးရုံရောက်တယ် ။
၂၀ ကျော်ပြန်ပို့ခံရတယ် ။
ဒီလိုမျိုး အလားတူ ဇာတ်လမ်းတွေဟာ မလေးရှားမှာ အချိန်တိုလေး အတွင်းမှာတင် ၊
မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ ။
ငါပစ္စည်းနဲ့ ငါ (…..) တာ နင်တို့ကဘာဝင်ပြီး (…..) ကြိမ်းနေတာလည်းလို့ ၊
မပြောလိုက်ပါနဲ့ ညီမလေးတို့ရယ် ။
ဘယ်နေရာပဲရောက်နေနေ….. အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းနေထိုင်တဲ့ ၊
မြန်မာမိန်းကလေးတွေလည်း ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ အကြွင်းမဲ့ လက်ခံပါတယ် ။
ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးအပုတ်မခံနိုင်သလို ၊
ငါးခုံးမတွေက မမြင်မတွေ့ချင်တော့လောက်အောင် သိပ်ကို များလာတော့လည်း ၊
ကျွန်တော်တို့ အကြိမ်ကြိမ် စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ် ။
အမျိုးမတူတဲ့အပြင် ဘာသာပါ မတူသူတွေနဲ့ အခုလို Living Together ဆိုတာတွေကို ၊
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုစိတ် ဘယ်လို နှလုံးသားနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေရမလဲ ။
မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် နီပေါ လူမျိုးနဲ့ Living Together နေရင်း နီပေါကို လိုက်ပါသွားခဲ့တယ် ။
နီပေါမှာ သူတို့အတွဲ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို နီပေါတွေက အင်တာနက်ပေါ်မှာ ၊
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို နှလုံးသား ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ ကြည့်ရမလဲ ညီမလေးတို့ရယ် ။
ကျွန်တော်တို့ မလေးရှား ရောက်ခါစက မလေးရှားမှာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ ညစ်ညမ်းခွေဆိုတာ ၊
ရွှေပေးရင်တောင် ကြည့်လို့မရနိုင်ပါဘူး ။
ရှိလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး ။
အခုများတော့ Home Made လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးချင်း လိင် ဆက်ဆံနေတဲ့ ပုံတွေ ဗွီဒီယိုတွေ ၊
လူမျိုးခြားနဲ့ ဘာသာကွဲတွေနဲ့ လိင် ဆက်ဆံနေတဲ့ ပုံတွေ ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေဟာ ၊
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဖုန်းတိုင်းလိုလိုမှာ မမြင်ချင်မှ အဆုံးပါ ။
ကျွန်တော်တို့တွေ အရင်က တစ်ခြား လူမျိုးခြားတွေကို ပြောခဲ့တဲ့ ၊
” ငါတို့ မြန်မာတွေဆိုတာ ညစ်ညမ်းခွေမရှိဘူးကွ ….. ”
” ငါတို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ပါတဲ့ ညစ်ညမ်းအခွေတွေ ဘယ်တော့မှ မရှိဘူးကွ ….. ”
ဆိုတဲ့ စကားတွေကို အခုလိုအချိန်မှာ ၊ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့ ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ ငြင်းလို့ရနိုင်ဦးမှာလဲ ။
ကိုယ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အမှားတစ်ခုဟာ ….. ကိုယ့်တစ်ယောက်သာ ထိပါးနိမ့်ကျရုံတင်မကပဲ ၊
တစ်မျိုးသားလုံးကို တန်ဖိုးမဲ့စေတယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ ။
မြန်မာယောင်္ကျားလေးတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ကိုယ် အတူဆက်ဆံတဲ့ ကိစ္စကို ၊
ဗွီယိုဒီနဲ့ မှတ်တမ်းတင်တာဟာ ၊
ကိုယ့်အဆင့်အတန်းနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် နင်းချေရုံသာမကပဲ ၊
မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ သရဖူဖြစ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ဟီရိသြတပ္ပတရားကိုပါ နင်းချေ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပါပဲ ။
ကျွန်တော့်ကို အကူအညီတောင်းလို့ အလုပ်သွင်းပေးခဲ့ဖူးတဲ့ Living Together နှစ်ယောက်အကြောင်း အနည်းငယ်ပြောပြပါမယ် ။
ကောင်မလေးက သိပ်လှတယ်….. ရန်ကုန် ကြို့ကုန်းကပါ ။
သူ့အဖေက ရှေ့နေတစ်ယောက် ဖြစ်သလို မုဆိုးဖိုကြီးပေါ့ ။
ညီအမနှစ်ယောက်ထဲ ရှိတာမှာ သူကအကြီး….. အဲဒီတော့ တိုတိုပြောရရင် မလေးကို ရှိတာလေး ထုခွဲရောင်းချပြီးလာတယ် ။
တစ်နေ့လုပ်ခ ၁၈ ရင်းဂစ်နဲ့ မလုံလောက်တော့ စက်ရုံကနေ ထွက်ပြေးပြီး အိုဗာစတေးနဲ့ အပြင်မှာ အလုပ်ရှာလုပ်တယ် ။
အဲဒီတော့ ဘာသာခြား မြန်မာနိူင်ငံသား တစ်ယောက်နဲ့ ငြိစွန်းတယ် ။
သူ့ချစ်သူ ကောင်လေးက ကတိပေးတယ် ။
သူ့ကိုယူရင် ကိုရင် ဝတ်ပြပါ့မယ် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ဝင်ပါ့မယ်…. တဲ့…..။
ကောင်မလေးက ယုံလိုက်တယ် …. နှစ်ယောက်ထဲသာ နားလည်တဲ့ Living Together နေကြတယ် ။
ကိုရင် ဝတ်ဖို့မပြောနဲ့ ….. ကောင်မလေးကိုပါ သူတို့ဘာသာထဲ မဝင်လို့ဆိုပြီး နေ့စဉ်ပြဿနာရှာတယ် ၊ ရိုက်တယ် ။
ကောင်မလေးကတော့ ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်ပေါ့ ။
အဲဒီတော့ သူတို့ ရန်ဖြစ်တိုင်း ကျွန်တော်က မြင်တွေ့နေရတယ် ။
နောက်ဆုံး….. ကျနော် လူကြီးစိတ် မမွေးနိုင်တဲ့တစ်နေ့ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တာမို့ ၊
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ နှစ်ယောက်လုံးကို အလုပ်ကနေ ထွက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် ။
ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေနဲ့ သူ့ဘဝအနေအထား ဘာတွေများ ဆက်ဖြစ်နေမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ၊
ကျွန်တော် မသိတော့ပါဘူး ။
ဒီဘဝကို သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီး သူပဲ စီရင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အတိုင်း သူရိတ်သိမ်းနေလောက်ပါပြီ ။
မြန်မာအမျိုးသမီးကောင်းလေးတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လို ဘဝမျိုးပဲရောက်နေနေ ၊
ဘယ်နေရာမှာပဲ ရောက်နေနေ ၊
အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ပြီး ၊ မိန်းမတို့အိနြေ္ဒ ရွှေပေးလို့မရ ဆိုတဲ့ မြန်မာမလေးတွေအဖြစ်ပဲ မြင်တွေ့ချင်ပါတယ် ။
ညီမလေးတွေကို ထိရင် မချိအောင် နာတတ်တဲ့ မြန်မာနှလုံးသားတွေကို
နင်တို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လည်းဆိုတဲ့ စကားနဲ့တော့
ရိုက်ချိုးမပစ်လိုက်ပါနဲ့ ညီမလေးတို့ရယ် ။
မြင်ရ ကြားရ စိတ်မချမ်းသာရတာတွေလည်းအများကြီးပါ။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရောက်မှာရယ်လို့မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသ ရောက်ရောက်
ကိုယ့် ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားလေးစားတတ်တဲ့အမျိုးကောင်းလေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်။
ကျနော် မလေးရောက်စ ဟိုတုန်းက ဒါမျိုးတွေ မကြားဘူးခဲ့ ၊ မရှိဘူးခဲ့ …
ဒေသခံ မိတ်ဆွေတွေက ဒီလိုဒီလို မြန်မာမတွေ ဒီမှာရှိသလား မေးရင် တစ်ယောက်မှမရှိဘူးလို့ 
ရင်ကော့ ဖြေခဲ့ တာချည်းပဲ။
ဖြောင်း.. ဗြွတ်.. :saut:
ကမ္ဘာကျော် အမေရိကန်ကြက်ကြော်ဖြစ်တဲ့ KFC ဆိုင်ခွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့မှာ လာမယ့် ဧပြီလလောက် ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ်က နဝဒေးလမ်းမှာ ဖွင့်လှစ်မယ့် KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်အတွက် ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုတွေကို ပြုလုပ်နေပြီး အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆိုပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံက KFC ကြက်ကြော်ကုမ္ပဏီကနေ တိုက်ရိုက်ဆိုင်ခွဲဖွင့်မှာဖြစ်ပြီး ဆိုင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ သင်တန်းတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကအစ မလေးရှားကနေ ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Voice ကတွေ့ လို့ပါ
အရင့်ယောင်မှတ်တမ်းကို စတစ်ကီပိုစ်လုပ်ဖို့ မေ့နေသလား သဂျီး…..
မိုးသီးဇွန်မုန်းသူများ ဖတ်ပြီး စားမဝင်အိပ်မပျော် ဖြစ်စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ပါ :harr:
ဝေမှူး – နိင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အကိုရဲ့ အမြင်တွေကို သိချင်တယ်။
မိုးသီး – ဒီအမေးကို ပေါင်းချုပ်ပြီးပြေရမယ်ဆိုရင် ၊ အစိုးရကချင်ဒေသကိုထိမ်းချုပ်ဖို့ ဆိုတာက
ဝေမှူး – ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့ ကလဲ ပြောနေကြတယ်ဗျ၊ ဥပမာ ကြံ့ခိုင်ဖွင့်ဖြိုးရေးအမတ်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးလှရွှေ က လုိုအပ်လာရင် ခွန်အားသုံး (Coercion) ပြီး တော့လဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရ တာပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ သူက အမေရိကန်နဲ့သိရိလင်္ကာနိင်ငံတွေကို ဥပမာပြထားတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
မိုးသီး – ဒါကတော့သဘောတရားရေးအပိုင်းဖြစ်လာတာပေါ့လေ။
ကျမ မေမေ က ကိုမိုးသီးကို သိပ်သဘောကျတယ်။နိုင်ငံရေးအကြောင်းနားလည်လို့ လဲမဟုတ်ဘူး။ မေမေ က အတိုက်အခံ ပါတီဆိုရင်သဘောကျတယ်။ အိမ်မှာလဲမေမေ က အတိုက်အခံ ပါတီပဲ။ ကိုမိုးသီးပြောသွားတာလေးတွေ တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ သူကြီးရဲ့ စုံစီနဖာတွေကတော်တော်ဗဟုသုတရပါတယ်။ ကျမ က ပညာရှင်မဟုတ်တော့ လူသားအစကို သိပ်မစဉ်းစားချင်ဘူး။ အသားအရောင်နဲ့ လူမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံရင်မုန်းတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ အဲလို မဆက်ဆံမိအောင် သတိထားရတယ်။ မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို ဈေးပေါတယ်ပြောပြီးနှိပ်ချဆက်ဆံတာ မြန်မာအမျိုးသားတွေပါပဲ။
ကိုစိုးမိုး ရေ ………………… . . . ကွက်တိ ပဲ ဟေ့ . .. (ခွိခွိ)။
ရဟန်းမင်းက.. နှစ်၆၀၀ မှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်… နှုတ်ထွက်လိုက်တာလည်းရှိသွားတယ်…
Yahoo! News (blog)-5 hours ago
VATICAN CITY (Reuters) – Pope Benedict left the Vatican on Thursday after pledging unconditional obedience to whoever succeeds him to ..
CASTEL GANDOLFO, Italy (AP) — Benedict XVI became the first pope in 600 years to resign Thursday, ending an eight-year pontificate …